राति बढी मोबाइल चलाउनेहरु होसियार ! - विवेचना
राति बढी मोबाइल चलाउनेहरु होसियार !
July 12, 2018 515 Views
अनुसन्धानले अँध्यारोमा स्मार्टफोन चलाउनु खतराजनक हुने बताएका छन् । रातमा सुत्नुअघि मोबाइल चलाएमा आँखाको रेटिनामा गम्भीर असर पर्छ । अमेरिक मस्कुलर डिजेनेरेसन फाउन्डेसनका अनुसार यसबाट आँखाको ज्योति कमजोर हुन जान्छ । रातको समयमा सुत्नुअघि मोबाइल चलाएको खण्डमा शरीरमा मेलाटोनिन (Melatonin) नामक हर्मोनमा कमी आउन थाल्छ ।
हार्भड युनिभर्सिटीले गरेको अनुसन्धानका अनुसार शरीरमा मेलाटोनिन हर्मोनको कमी आएमा राति अबेरसम्म निद्रा नलाग्ने समस्या आउँछ । युनिभर्सिटी अफ ओरसेष्टर बेलायतले गरेको अध्ययनले राति अबेरसम्म स्मार्टफोन चलाएमा शरीरमा मेलाटोनिन हर्मोनको कमी आउँदा तनाव बढ्ने देखाएको छ । राति अबेरसम्म स्मार्टफोन चलाएमा ब्रेन ट्युमर अर्थात् मस्तिष्कको क्यान्सर पनि हुन सक्छ । युनिभर्सिटी अफ बोर्डेक्स (University of Bordeaux) फ्रान्सले गरेको एक अध्ययनले यसबाट मस्तिष्कको स्मरण शक्तिमा पनि असर पार्ने देखाएको छ ।
राति अबेरसम्म मोबाइल चलाएमा शरीरले पुरा निद्रा पाउन सक्दैन । यसले दिनभर नै थकानको महसुस हुन्छ । राति लामो समयसम्म मोबाइल चलाएमा त्यसले आँखाको सिलियरी मांसपेशीमा असर पर्दछ । जसले आँखाको फोकस गर्न सक्ने शक्ति कमजोर हुन्छ । र आँखालाई कुनै कुरामा फोकस गर्न समस्या आउँछ । राति अबेरसम्म मोबाइल चलाएमा यसबाट आँखा दबाब पर्न जान्छ । यसबाट डार्क सर्कलको समस्या देखिन सक्छ ।
Previous दलित विद्यार्थी लगे आफन्तले फिर्ता
Next इमान्दार कमरेडहरुले विवेक र्पुयाउने बेला